Waa maxay Istaraatiijiyada Suuqgeyntu? | Martech Zone
Waa maxay Istaraatiijiyada Suuqgeyntu?
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxaan ka caawinayay macaamiisha Salesforce horumarinta istiraatiijiyad ku saabsan sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo barnaamijyadooda shatiyeysan. Waa fursad xiiso badan oo runtii iga yaabisay. Aniga oo shaqaale hore ka ahaa shirkadda ExactTarget, waxaan si weyn u taageersanahay awoodaha aan dhamaadka lahayn ee Salesforce iyo dhammaan wax soo saarkooda la heli karo.
Fursadani waxay iigu timid iyada oo loo marayo lammaane Salesforce oo leh sumcad aad u fiican oo ku saabsan hirgelinta, horumarinta, iyo isku-dhafka ururinta macaamiisha Salesforce ee macaamiishooda. Sanadihii la soo dhaafay, waxay ka saareen beerta… laakiin waxay bilaabeen inay ogaadaan farqiga u dhexeeya warshadaha u baahnaa buuxinta - istaraatijiyad.
Salesforce waxay siisaa ilo aan la tirin karin iyo kiisaska isticmaalka aadka u sarreeya ee rajada laga qabo sida macaamiisha kale ay sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan ​​barxadda. Iyo Saaxiibkeyga Salesforce wuxuu la qabsan karaa hirgelinta istiraatiijiyad kasta. Farqiga u dhexeeya, in kastoo, ay tahay in shirkaduhu inta badan la galaan hawlgelinta Salesforce iyo lammaanaha iyada oo aan si dhab ah loo go'aamin waxa istiraatiijiyaddu noqon karto.
Hirgelinta Iibinta iibku maahan a Istaraatiijiyadda Suuqa. Hirgelinta Salesforce waxay u dhowdahay wax walba - laga bilaabo sida aad wax u iibiso, cidda aad u iibiso, sida aad ula xiriirto iyaga, sida aad ula jaanqaado shirkadahaaga kale shirkadaha, iyo sidoo kale sida aad u cabirto guusha. Qaadashada liisanka iyo u dirida logins ee Salesforce ma ahan istiraatiijiyad… waxay u egtahay inaad iibsato buug ciyaaro madhan.
Qorshe hawleed loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo laguna iibiyo wax soo saar ama adeeg.
Qaamuuska loo yaqaan "Oxford Living Dictionary"
A istaraatijiyad marketing waa qorshe ganacsiyeed guud ahaan ganacsiga si dadka loo gaarsiiyo ugana dhigaan macaamiisha wax soo saarka ama adeegga ay ganacsigu bixiso.
Haddii aad iibsatay a istaraatijiyad marketing ka la taliye, maxaad ka filaneysaa inay keenaan? Waxaan su'aashan hordhigay hogaamiyeyaasha dhamaan warshadaha waxaadna layaabi doontaa jawaabaha kaladuwan ee aan kahelay… laga soo bilaabo fikirka illaa iyo dhamaadka xukunka.
Horumarinta istiraatiijiyad suuqgeyn ayaa ah hal talaabo guud ahaanada safarka suuq geynta:
Sahaminta - Kahor intaan safarku bilaabmin, waa inaad fahamtaa meesha aad joogto, waxa hareerahaaga ah, iyo halkaad u socoto. Shaqaale kasta oo suuqgeyn ah, la-taliye la soo kireystay, ama hay'ad waa inuu ku shaqeeyaa wejiga daah-furka. La'aantiis, ma fahmaysid sida loo gaarsiiyo agabkaaga suuqgeynta, sida aad uga istaagi laheyd tartanka, ama ilaha aad adigu gacanta ku heyso.
Strategy - Hadda waxaad haysataa qalab aad ku horumariso istiraatiijiyad aasaasi ah oo loo adeegsado in lagu gaaro himilooyinkaaga suuq-geyn. Istaraatiijiyaddaadu waa inay ku jirtaa muuqaalka guud ee yoolalkaaga, kanaalladaada, warbaahintaada, ololeyaashaada, iyo sida aad u cabbiri doonto guushaada. Waxaad ubaahantahay bayaanka howlgalka sanadlaha ah, diirada sedexdii biloodba mar, iyo bilaha ama usbuuclaha waxsoosaarka. Kani waa dukumiinti dhaqso badan oo isbeddeli kara waqtiga, laakiin leh iibsiga ururkaaga.
Hirgelinta - Faham cad oo ku saabsan shirkaddaada, booskaaga suuqa, iyo ilahaaga, waxaad diyaar u tahay inaad dhisto aasaaska istiraatiijiyadda suuqgeynta dijitaalka ah. Joogitaankaaga dhijitaalka ahi waa inuu lahaadaa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah fulinta iyo cabbiraadda xeeladaha suuqgeynta soo socota.
fulinta - Hadda oo ay wax waliba meesha yaalliin, waxaa la joogaa xilligii la fulin lahaa xeeladaha aad soo saartay lana cabbiro saameyntooda guud.
Dhiciyaan - U fiirso dirxiga qabow ee aan ku soo darnay shaxanka qaata istiraatiijiyadeena sii kordheysa isla markaana ugu soo celisa dhinaca Discovery markale! Ma jiro wax dhameystir ah Safarka Suuq-geynta Agile. Mar alla markii aad fulisay? Istiraatiijiyaddaada suuq-geynta, waa inaad tijaabisaa, cabirtaa, hagaajisaa, oo aad la qabsataa waqti ka badan si aad u sii waddo inaad kordhiso saameynta ay ku leedahay ganacsigaaga.
U fiirso istiraatiijiyaddu waxay ka horreysaa hirgelinta, fulinta, iyo hagaajinta. Haddii aad horumarinaysid ama ka iibsanaysid istiraatiijiyad suuqgeyn shirkadeed shirkad - taasi macnaheedu maaha inay fulinayaan istiraatiijiyaddaas, mana fulinayaan.
Istaraatiijiyad Suuqgeyn ah: Fintech
Waxaan helnay webinar cajiib ah oo la imanaya Salesforce, Dhaqannada ugu Fiican ee Abuurista Safarada Khibradda Macaamiisha ee Shirkadaha Adeegga Maaliyadeed, Halkaas oo aan kaga munaaqishooneyno horumarinta istiraatiijiyadda safarka suuqgeynta shirkadaha Adeegyada Maaliyadeed. Webinar-ka ayaa yimid kadib markii aan sameeyay cilmi baaris dhulka ah oo ku saabsan warshadaha kala qaybsanaanta dhijitaalka ah ee ka dhex dhacayay hay'adaha maaliyadeed iyo macaamiishooda.
In la horumariyo istaraatiijiyada suuq geynta, waxaan aqoonsanay:
Kuwa ay ahaayeen macaamiishoodu - laga bilaabo aqoontooda maaliyadeed, illaa heerka noloshooda, illaa caafimaadka maaliyadooda, iyo shaqsiyadooda.
Halka dadaalkoodu suuq geyn jiray - sida ay u bislaadeen ururkooda dhisida xiriirka iyaga iyo iyaga. Ma garanayeen cidda ay ahaayeen, inay wax barayeen iyo in kale, iyo in macaamiishoodu ay dhab ahaan ka faa'iideysteen inay wax ka bartaan, iyo in macmiilku dhab ahaan shaqsi ahaan u gaadhay?
Sidee ayuu ururku u hawl galay - hadday hay'addu weydiisato jawaab celin, ma qiimeyn karaan su'aalaha kor ku xusan, ma haysteen ilo ay wax ku bartaan oo ay ku qalabeeyaan macaamiishooda, safarka runtiina ma shakhsibaa?
Ururku ma haystay ilo dhaqaale - cilmi baaristayadu waxay muujisay dhowr iyo toban mowduuc oo macaamiishoodu had iyo jeer ku baaraan internetka - laga bilaabo maaraynta amaahda, maareynta hantida, qorsheynta guryaha, ilaa qorsheynta howlgabka. Macaamiisha waxay raadinayeen qalab DIY ah oo ka caawiya inay qiimeeyaan, qorsheeyaan, oo ay fuliyaan dhaqaalahooda… iyo hay'adaha ay la shaqeynayeen waa inay wada leeyihiin (ama ugu yaraan u tilmaamaan lammaane weyn).
Miyuu ururku ka muuqday mid kasta oo ka mid ah marxaladaha wax iibsiga - laga bilaabo aqoonsiga dhibaatada, ilaa baaritaanka xallinta, shuruudaha iyo xulashada ururrada maaliyadeed, ururku ma gaari karaa heer kasta oo safarka iibsadaha ah? Ma haysteen qalab iyo agab si ay uga caawiyaan xaqiijinta natiijooyinka iibsadaha oo ay uga caawiyaan inay gurigooda ku kaxeeyaan hawlgelinta?
Ma laga yaabaa in ururka lagu gaaro dhexdhexaadinta la doorbido - maqaallada ma ahan kuwa kaliya ee dhexdhexaad ah. Xaqiiqdii, dadka qaar xitaa waqti uma qaataan inay wax akhriyaan mar dambe. Miyuu ururku u adeegsadaa qoraalka, sawirrada, maqalka, iyo fiidiyowga si uu u gaaro himilooyinkooda ama macaamiishooda meesha ay joogaan door bidayso?
Markii la hirgeliyo, sidee guusha loo cabbiri doonaa istaraatijiyad suuqgeyn ah? Kahor intaadan hirgelin istiraatiijiyad, awoodaha cabbirka waa in tixgelin la siiyaa si aad u ogaato inay shaqeyneyso. Mudo intee le'eg ayaad sugi doontaa ka hor intaadan go'aansan sida ay u guuleysan tahay? Goorma ayaad ololeyn doontaa ololeyaashaada? Goorma ayaad laalaabi doontaa haddii aysan shaqeynin?
Haddii aad ka jawaabi karto dhammaan su'aalahan, markaa waxaad u maleyneysaa inaad haysato mid adag istaraatijiyad marketing. Istaraatiijiyad suuqgeyn ayaa kaa caawin doonta inaad kashifto, ogaato, iyo qorshe aad u baahan tahay qalab ama ilo.
Tusaalaha kore ee fintech, shirkadaada waxaa laga yaabaa inay ogaato in goobta ay ka maqan tahay xisaabiyaha amaahda guryaha sidaas darteed waxaad ku jirtaa qorshahaaga inaad mid dhisto. Taas macnaheedu maaha istiraatiijiyaddu waxay qeexaysaa sida kalkuleytarku u eg yahay, sida aad u horumarinayso, meesha lagu martigelin doono, ama sida aad u kobcinayso… kuwani waa dhammaan tallaabooyinka fulinta ololaha ee hoos loo dhigi karo wadada. Istaraatiijiyaddu waa in la dhiso kalkuleytar aad u baahan tahay si aad ula xiriirto macaamiisha. Fulinta iyo fulintu waxay imaanaysaa goor dambe.
Istaraatiijiyaddu waa Farqiga u dhexeeya Baahida iyo Fulinta
Markii aan la tashanayey ururo badan oo dheeraad ah oo la socda Salesforce, waxaan ka saaraynaa jardiinada waxyaabihii aan ku guuleysanay. Salesforce waxay ka caawisay macmiilka inuu aqoonsado baahida loo qabo xalka farsamada si looga caawiyo iibkooda iyo dadaalkooda suuq geynta.
Lammaanaha Salesforce wuxuu u joogaa inuu ka caawiyo inay hirgeliyaan xalka geeddi-socodka iyo xeeladaha ay rajeynayaan inay fuliyaan. Laakiin waxaan u dhexeeyaa labada garashada farqiga iyo ka shaqeynta inta u dhexeysa aaladaha, lamaanaha, iyo macaamilka si loo horumariyo qorshe si ay u gaaraan rajadooda iyo macaamiishooda. Markii uu jiro wax isku afgaran dhammaanteen, lammaanaha Salesforce ayaa soo gala oo fuliya xalka, ka dibna macmiilku wuxuu fuliyaa istiraatiijiyadda.
Iyo, dabcan, sida aan u cabbirno natiijooyinka, waa inaan xeeladeynno waqti ka waqti. Goob ganacsi, taasi waxay qaadan kartaa bilooyin in la gaaro, in kastoo.
Tags: CRMfarsamada dhaqaalahamarketingistaraatijiyad marketing